Landela kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 12, 2019 0 IiCententarios 783
I-Instagram yinethiwekhi yesibini yoluntu enabasebenzisi abaninzi emva kwe-Facebook enkulu, abantu abaninzi ngakumbi basebenzisa eli qonga imihla ngemihla kunye nehlabathi liphela. Kungenxa yeso sizathu esinye Ezona zinto zinomtsalane kwesi sicelo ngabalandeli abanokuthi babekhona okanye ulandele kwi-Instagram ukuze ubone wonke umxholo olayishwa ngumntu.
Ukulandela umntu kunye nokukulandela kwimiba efanayo, kodwa kwangaxeshanye bahluke kakhulu. Ngale ndlela, ukuba umtsha usebenzisa i-Instagram kwaye ufuna ulwazi oluthe kratya kunye neengcebiso, siya kugxila ekuchazeni indlela ekufuneka wenze ngayo ukuqala ukulandela nawuphi na umntu okanye iphepha.
Indlela yokulandela kwi-Instagram?
Inyathelo lokuqala kukungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram ngokucinezela i icon kwiselfowuni okanye kwikhompyuter yakho. Nje ukuba ungaphakathi, vula isithuba sokukhangela esibonakalayo xa ucinezela iglasi yokukhulisa ezantsi kwesikrini. Emva kwexesha kuya kufuneka bhala emgqomeni igama lomntu okanye lombutho ofuna ukulandela, xa uluhlu luvela ngezantsi, cinezela igama lomsebenzisi ofuna ukumlandela. Kwimeko ekuthethwa ngayo, landela udumo okanye umbutho kodwa awukwazi kufumana i-akhawunti yakho, unokukhetha igama lakho kubasebenzisi bakaGoogle.
Ukuba sele uyifumene iakhawunti, ungacinezela "uqhubeke" ukhetho kwikona ephezulu ngasekunene.
Landela abahlobo bakho be-Facebook kwi-Instagram
Ngenisa iprofayili yakho njengoko uhlala usenza ngokucinezela i icon kunye nefoto yakho ezantsi. Emva koko chukumisa i amanqaku amathathu athe tyaba xa usebenzisa inkqubo yokusebenza ye-iOS kwaye eyenzelwe yona yi-Android Amanqaku amathathu athi nkqo, kwicala elingaphezulu lephepha ukuvula ezinye iinketho.
Kweli candelo uya kulifumana apha ngezantsi "Landela abanye abantu" ukhetho lwe "Abahlobo bakaFacebook" kufuneka uyichukumise ukuze ubalandele, emva koko ucinezele "abafowunelwa" ukuze wenze okufanayo kuluhlu lweefowuni zonxibelelwano.
Unokhetho ezimbini onazo kwi-akhawunti yakho, Inokubakho esidlangalaleni kwaye yangasese, Kwimeko yeeakhawunti zikawonke-wonke, nabani na unokulandela ngaphandle kwesigunyaziso sakho, uya kwazi kuphela ngokwandisa inani labalandeli. Ngelixa une-akhawunti yabucala, wonke umntu ofuna ukukulandela Kuya kufuneka uhambe ngesigunyaziso sakho kuqala.
Kuba siyayazi indlela esingabalandela ngayo abasebenzisi esibafunayo, siya kufunda ngexesha ukuba senze njani xa singafuni ukubalandela nangakumbi, kule migca ilandelayo yingcaciso.
Ukuyeka njani ukulandela abantu abangandilandeliyo kwi-Instagram?
Zininzi iimeko apho unokufumana khona kwiqonga le-Instagram ezinye iiakhawunti ozilandelayo nezingakulandeli emva, nokuba ubuyilindele nini loo nto. Kwaye mhlawumbi loo meko ikubangela wonakaliswe kwaye ungathanda le nethiwekhi yoluntu Ndikhethe apho bendinokuthi ndibabhalele abo bantu abangakulandeliyo ukubaqonda ngokukhawuleza kwaye uthathe inyathelo. Ngale ndlela, kwaye ngethamsanqa, unethuba lokusebenzisa i- "Combin" esisicelo esinokubona kwangoko abo bangakulandeliyo bayeke ukulandela kanyekanye okanye ngokukhetha xa ucofa.
Amanyathelo okufumana uCombin
Khuphela usetyenziso olukhoyo IMac, PC y Linux
Yivule nje ukuba ikhutshelwe kwaye uqalise iseshoni yakho ngeakhawunti yakho ye-Instagram. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iCombin ayidluliseli okanye iqokelele ulwazi oluyimfihlo kubantu besithathu njengoko ixhasa ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini ze-Instagram.
Ukufikelela kuzo zonke iiakhawunti ze-Instagram ezikulandelayo, vula ithebhu "Abasebenzisi".
Cofa ukhetho "Akandilandeli" kwaye uluhlu lwabasebenzisi abangakulandeliyo luya kuvulwa.
Emva koko cinezela "Khetha Zonke" uze ucinezele "Yeka ukulandela abasebenzisi" Kwaye ngale ndlela unokuyeka ukulandela zonke iiakhawunti ze-Instagram ezingakulandeli.
Emva kokwenza inkqubo umsebenzi uza kwenziwa ngokuzenzekelayo kwisicelo.
Ukuqinisekisa ukhuseleko lwe-akhawunti, I-Combin ayisebenzi kwangoko imisebenzi yesenzo ecwangcisiweyo. Ke, isicelo siyayenza ngokuthe ngcembe ixesha elingaphezulu kwaye ngenxa yoko kuthintela ukuvelisa i-akhawunti.
Uyacetyiswa ukuba ungayishiyi inkqubo yendlela yobunzima ukuya "Umngcipheko" i24 / 7, ukuthintela naluphi na uhlobo lokuphazamiseka.
Ngoku, sele sisazi indlela yokuphelisa abo bantu bangasilandeliyo kwiqela labasebenzisi esibalandelayo. Kodwa ngoku siza kuthetha ngesihloko esithandwa ngabantu abaninzi abafuna ukufumana abalandeli abaninzi kwiakhawunti yabo.
Uyifumana njani abalandeli kwi-Instagram yasimahla?
Oku kunokuba ngomnye wemibuzo ebuzwa rhoqo ngabasebenzisi be-Instagram. Nangona kunjalo uninzi lwabo Bayayityeshela into yokuba iiwebhsayithi zokunxibelelana ziyayeka ukukhululwa, kwaye ayibhekiseli ekuhlawuleni imali ukuyisebenzisa, kodwa kufuneka unikezele ngomzamo wentengiso onokuthi uvelise abaphulaphuli bakho kunye Yandisa inani labalandeli.
Iziqulatho ezivelisa ukubandakanyeka okungakumbi kwi-Instagram
Kwimeko apho une-akhawunti yeshishini enezinto zomntu okanye zeshishini, enye yezitshixo zokuphumelela kupapasho kukubonisa icala labucala nangakumbi labucala. Kwelinye icala, ukuba yiakhawunti yobuqu, ubuntununtunu kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha kumxholo owufakayo sisigcawu sokufikelela kubaphulaphuli abaninzi abakulandelayo.
Njengoko uyazi, i-Instagram yinethiwekhi yentlalo ebonakalayo kakhulu, kungoko umxholo osebenza kakhulu Kuyabonakala, kukufutshane, kwaye oku kufanele kube kokubini ngumbono kunye nomyalezo owudluliselayo. Kukwabalulekile ukuba iimpapasho zenziwe kakhulu kwaye zibambe abaphulaphuli, onokuthi wazi xa usenza uphando lwabemi abakulandelayo kunye naleikhankanywe ukuba ikulandele emva komxholo ngamnye omtsha.
Ukusetyenziswa kwee-hashtag kwi-Instagram
Ngamafutshane, ii-hashtag ngumtya weempawu owenziwe ngegama elandulelwa linani. Ukuyisebenzisa awuxeleli abasebenzisi kuphela ukuba yintoni umxholo womxholo oyilayisha, kodwa kwakhona uyakwazi ukufikelela kwiiprofayili ezingakwaziyo kwaye unokuba nomdla kwiifoto zakho kunye nevidiyo.
Oku kunokwenzeka ngenxa yokutshintsha kwesicelo esenziwe kutshanje esenza ukuba kulandelwe upapasho olunombhalo phantsi kwe-hashtag. Umda wazo onokuzisebenzisa kupapasho yi-30, kunye nomtya wabalinganiswa ocinga ukuba ulunge kakhulu. Kodwa iingcali, nangona zingenalo inani elichanekileyo, Bacebisa ukuphosa phakathi kwe-5 kunye ne-hashtag ye-11 kumxholo owuhambisayo.
Kungenxa yokuba abaninzi bajonga ukuba ukubeka ngaphezulu kwe-15 kunokubonwa njengogaxekile ukususela kwi-algorithm entsha ye I-Instagram iyiguqulela njengenkqubela phambili, ebangela ukuba ubungakanani beempapasho ozihambisayo zincitshiswe.
Faka umxholo kumabali e-Instagram
Lo msebenzi owaqaliswa kwi-2016 eyakuvumela abasebenzisi ukuba bafake iifoto, yongeza iifilitha kunye neziphumo, ukwenza ibali kunye nabo, kunyaka omnye Ukusebenza okwandileyo ukuvumela abasebenzisi ukuba bavulele ividiyo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kumabali e-Instagram kukuba ziiyure zokugqibela ze-24 kwaye nguye onika ubunjani bendalo lo msebenzi obumenza Khuthaza ukuzibandakanya nabaphulaphuli bakho.
Elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram
Phambi kokuba sikuxelele ukuba kwenzeka ntoni apha, siza kukucacisela ukuba yinto yothethathethwano ebesithetha ngayo kwaye kungenzeka ukuba sele uyazi. imalunga nobudlelwane iakhawunti yakho enayo kunye nezinye iiakhawunti ze-Instagram kwaye kumiselwa zi "likes" kunye nezimvo ozishiya kwizithuba zabo.
Ngale ndlela, i-Instagram igqiba ekubeni ingakubonisi iziqulatho ezilayishwa abanye abasebenzisi Ucwangco ngokulandelelana njengangaphambili, Ngoku ziyavela kuqala ezindabeni zakho iimpapasho ezibonakala kuwe kuqala zezi zeakhawunti ozibophelele kuzo.
Yiyo loo nto kufuneka siqwalasele apha ngasentla kwaye siqalise ukupapasha ngamaxesha apho uninzi lwabasebenzisi luxhumene. Kwaye mhlawumbi uyazibuza ukuba ungayazi njani loo nto, kulula kakhulu, ukuba une-akhawunti ye-Instagram yenkampani, uya kuba nakho ukufikelela kubalo olunxulumene nabalandeli bakho kunye neempapasho, Ngale ndlela unokubona xa inani elikhulu labalandeli likwi-intanethi.
Kwelinye icala unokufumana ulwazi olubalulekileyo njengelizwe apho abalandeli bakho bakhoyo, kunye nezixeko, abathandana babo, kunye nobudala. Kodwa kwimeko yokuba awunayo i-akhawunti yeshishini oku ayizukuphazamiseka ukwazi ukuba leliphi elona xesha lifanelekileyo, kuba kukho inani lezicelo. okukuvumela ukuba uhlaziye abalandeli bakho kwaye uchonge iiyure ezilungileyo zokulayisha umxholo wakho kwi-Instagram.
1 Indlela yokulandela kwi-Instagram?
1.1 Landela abahlobo bakho be-Facebook kwi-Instagram
2 Ukuyeka njani ukulandela abantu abangandilandeliyo kwi-Instagram?
2.1 Amanyathelo okufumana uCombin
3 Uyifumana njani abalandeli kwi-Instagram yasimahla?
3.1 Iziqulatho ezivelisa ukubandakanyeka okungakumbi kwi-Instagram
3.2 Ukusetyenziswa kwee-hashtag kwi-Instagram
3.3 Faka umxholo kumabali e-Instagram
3.4 Elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram
Ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram?